Nsuso Casino Online - Online Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Spanish Online Casino saịtị
Loading ... Spanish bụ otu n'ime mba kachasị na ịgba chaa chaa n'ụwa, ma na 1812, a na-ahazi lotiri mbụ. Na 1977, ọchịchị ndị Spain kpebiri iwu iwu ịgba chaa chaa. Na mbụ, ọ na-emetụta nanị ịgba chaa chaa, nke dabara na nkà, na 1981 ka a na-eji ígwè ọrụ ntinye iwu na ntụrụndụ ndị ọzọ yiri ịgba chaa chaa. Na mmalite 80s karịrị mmadụ iri na abụọ natara ikikere imeghe cha cha na Spain. Rịba ama maka ndị ọbịa na ndekọ ịgba chaa chaa anyị na-egosi na taa, ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa Spanish na-agba ọsọ. Obodo nwere ihe karịrị Xinos casinos na ihe dị ka ụzọ n'ụzọ anọ nke nde mpempe egwuregwu.
Na 2012 abanyela iwu mgbanwe iwu ọhụrụ ahụ, gụnyere iwu nke ndị na-arụ ọrụ n'ịgba chaa chaa n'Ịntanet, tinyere nhazi nke ntaramahụhụ maka ịhazi ịgba chaa chaa na-akwadoghị. Onye na-elekọta ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na mba ahụ bụ Ụlọọrụ Central maka usoro ịgba chaa chaa (Dirección General de Ordenación del Juego). Ọrụ ndị isi nke Office bụ ịnye ikikere, ịchịkwa ọrụ nke ịgba chaa chaa, nakwa maka ịbịakwute ego na ihe omume na-akwadoghị.
Ịgba Chaa chaa chaa na Spain
Ruo ogologo oge, ọ dịghị iwu ọbụla na-achịkwa ọrụ nke ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Spain. Otú ọ dị, ebe ọ bụ 2002, gọọmentị Spanish malitere ịbanye na ntụziaka nke iwu na nkwado iwu nke ebe nrụọrụ weebụ sinima n'ịntanetị. Nke a mere ka ị nweta iwu dị mkpa na ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Spain, bụ nke mechara kwadoro ndị ọrụ ikikere.
Iwu ahụ malitere na June 2012, nakwa ebe ọ bụ na e nweela ikikere karịa ndị 70 ịgba chaa chaa. Otú ọ dị, iwu doro anya na 25% ụtụ isi ahapụla ọtụtụ ndị ọrụ na-azụghị ahịa, Otú ọ dị, ahịa ịgba chaa chaa n'ịntanetị na mba ahụ na-agbapụ. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, a machibidoro ígwè ọrụ ntanetị na Spain. Ma ndị na-eme iwu na-ekpebi ịgbanwe ya, ma na njedebe nke oghere 2014 Online nke July, enwetawo ìhè ọkụ.
Ndepụta nke Top 10 Spanish Online Casino Sites
Ọgba chaa chaa na saịtị na-anabata ndị si Spain
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị si Spain, ma nye ha egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ị nwekwara ike ịgụ nyocha anyị maka saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ nkwụnye ụgwọ dịnụ maka ndị si Spai
Ịgba chaa chaa na Spain
Nkwụsị ọzọ na-aga njem CasinoToplists - ọ bụ anyanwụ na Spain na isi obodo ya dị ebube. Ndị na-ere ahịa na Madrid na-emegharị ya na akụkọ ihe mere eme ya, ọmarịcha ihe owuwu ya, àgwà na-agwụ ike na ndụ. Ndị na-akwado mmetụta uche na-egbuke egbuke adrenaline ga-ahụ ụlọ mgbakọ egwuregwu, ụlọ ọgbakọ na casinos nke mba ahụ!
Akara akụkọ ihe mere eme na ọdịdị ala nke Spain;
Cha cha na ịgba chaa chaa:
A na-ahapụ casinos na-ere ala ma kwadoro azụmahịa ịgba chaa chaa;
Ịla n'iyi na chaa chaa bụ ego mgbochi ma ọ bụrụ na nkwụfufu gafere uru, ụtụ isi na-arịwanye elu.
Ụlọ kasịnụ kasịnụ nke mba ahụ:
Iwu nke Las Vegas Sand - mgbagwoju anya bu 2022;
Ise ise nke Madrid na adreesị;
Ezigbo mmasị banyere Spain na ndị bi na ya.
Obodo Spain na akụkọ ihe mere eme nkenke
Alaeze nke Spain - otu n'ime obodo kacha mma, nke nwere mmasị na Europe.
Aha ya, nke a na-ezighi ezi, o si n'asụsụ Phoenician, bụ ebe a sụgharịrị "i-punks" dịka "Beach hyraxes (rabbits). "
O doro anya na, tupu e nwee ọtụtụ anụmanụ. Taa, Spen - obodo nke ndị ikom dị mpako na ụmụ nwanyị mara mma, ndị agụụ na-agụ maka ndụ, ịgba egwú, nkà na njem ha mara ụwa dum.
Isi obodo Spen, Madrid bụ akụkọ mpako nke dị na narị afọ nke iri. Taa, obodo ukwu a bụ ihe karịrị nde mmadụ atọ, bụ ebe dị jụụ nke ochie na ụlọ eze ndị dị na ọnụ ụzọ okporo ụzọ, ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na klọb.
Casinos na ịgba chaa chaa na Spain
Spain - mba di oke nkpa, ekwenyere na a na-egwuri egwu ma obu ihe o bula. Ndị Spania na-ahụ maka lotteries, egwuregwu kaadị, ịkụ nzọ na ịgba chaa chaa. Maka 2013 na egwuregwu ahụ, ọ na-eji ihe karịrị 10 ijeri euro. N'okwu a, ọnụ ọgụgụ nwa amaala nke mba a na-eji ntụrụndụ dị otú ahụ na euro 480 kwa afọ, nke dị elu karịa mba ndị ọzọ.
Azụmahịa ịgba chaa chaa na Spain kwadoro. E nwere oge mgbe ikike na ohere maka ndị egwuregwu na ndị na-agba chaa chaa na-emetụta, ma taa, a na-eduzi ya n'ụzọ iwu kwadoro. Na 2011, a na-eme ya maka nkwado iwu dịka iwu EU. N'otu oge ahụ enwere ọtụtụ mgbochi, dịka ọmụmaatụ, casinos nwere ike ị rụọ ọrụ naanị n'obodo ukwu, ọkacha mma n'èzí ókè obodo. Afọ nke ndị ọbịa - site na 18 afọ. Ụlọ ọrụ egwuregwu ga-adị n'otu ebe dị anya site na ibe ya.
iwu a na-enwetụbeghị ụdị ya bụ nke na-adabaghị na casino ahụ na ego akụ na ụzụ nabatara na 2013. Na njedebe afọ, ọ bụrụ na ọnwụ ahụ gafere ego nke winnings, ọ na-ebelata ụtụ ịkwụ ụgwọ. Ma na ụtụ isi ego ị ga-akwụ ụgwọ.
N'ezie, egwuregwu nke ndụ na-etinye uche na etiti isi obodo ahụ. Madrid kwadoro nnukwu ụlọ akụ atọ kachasị mma na ndị kasị mara mma nke mba ahụ na ọbụna Europe.
Ọkpụkpọ kacha ochie na nke kachasị amara na isi obodo Spanish - Casino de Madrid. Ụlọ ụlọ ise ahụ nwere ụlọ elu dị na Alcalá Street, 15. Na 1836, ụlọ ọrụ ahụ meghere dị ka ụlọ oriri maka ndị ọgaranya bara ọgaranya bụ ndị chọrọ ịgba chaa chaa iji jiri oge ha. Ụlọ ahụ bụ ihe kachasị mma nke Belle Époque, a na-echekwa ndị dị n'ime ya ka ọ na-acha ọcha: nkume marble ọcha, ọkwá, ihe ndị dị oké ọnụ ahịa, ákwà mgbochi na tablecloths.
Casino de Madrid kere 12 nnukwu ụlọ, zuru oke maka ịgba chaa chaa ọ bụla. Tinyere ihe ndị ọzọ, ndị ọbịa nwere ike ịmasị ihe osise ndị mbụ site na ndị nka a ma ama, ihe osise na ihe ochie. Enwere mmiri igwu mmiri na ụlọ egwuregwu, sauna, na ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, yana ebe a na-agụ ihe. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị oke ọnụ, ma ọ bara uru. Ọ bụ ebe a na 2011, gafere ikpeazụ EPT - European Poker Tour, nke a na-emekarị na Monte Carlo. Poker na-ewu ewu na Spain; ịchọta na isonye n'egwuregwu poker (nnukwu ma ọ bụ obere) n'oge ịnọ na mba ahụ dị mfe.
A na-ewere kasịnụ kasịnụ dị ka Spanish Gran Madrid, ọ dị 29 kilomita n'ebe ugwu nke isi obodo. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emeghe na 1981, ebe ya na-ekpuchi mita mita 8000, enweghị nkwụsịtụ nwere ihe ntinye oghere 200 dị iche iche.
Ụlọ ụlọ atọ ahụ, nke ụlọ a bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu na nke kachasị mma na Europe, na-ewepụ ahịa na ngosi mgbe niile. A na-eme atụmatụ ahụ na ụdị 50s. N'oge oyi maka ndị uwe ejiji ejiji - adụ na agbatị. Ọ na-adọrọ mmasị ileta ụlọ oriri na ọṅụṅụ dịkarịa ala akụkụ nke njem, ọmarịcha ihe niile mara mma.
N'ebe ndịda nke etiti Madrid, nanị 35 kilomita n'èzí obodo ahụ bụ Casino legendary ọzọ - Gran Casino Aranjuez. Ọ na-emeghe kwa ụbọchị, na-enye ndị ọbịa ọ bụghị naanị ọtụtụ ịgba chaa chaa, kamakwa ohere ịnweta ụtọ nri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na-atọ ụtọ na disko ma ọ bụ jikọọ na mba mba na-achọ flamenco show.
Euro Vegas na 2022
Isi ụlọ ndị isi obodo ahụ abụghị nanị ebe a maara ụlọ ịgba chaa chaa na mpaghara ọ bụla. Ebumnuche iji wuchaa ụlọ nke nnukwu mgbagwoju anya nke Las Sands Sand, na 2022 ka a gbanwee ghọọ Euro-Vegas. Ihe oru ngo a gụnyere 12 jikọtara ihe ntụrụndụ, nke na mgbakwunye na cha cha ga-agụnye ụlọ ndị nwere 18 puku igwe mposi, ụlọ nzukọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọbụna ihe nkiri.
Mgbe agwụsịsịrị Las Vegas Sand ga-abụ chaa chaa kachasị ukwuu na Europe, a na-ahazi ụgwọ ọrụ kwa ụbọchị maka ịnọ jụụ nke 36 puku ọbịa. Ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya maka Ụwa Ochie!
Spain na map nke Europe
Ebe nkiri Madrid
Museo del Prado. Adreesị: Paseo del Prado. Ụlọ ngosi ihe ebube dị na ụlọ akụkọ ihe mere eme, n'ime ndị ọbịa na-egosi ihe osise nke Spanish, Italian, Dutch and Furs masters.
Plaza Mayor. Adreesị: Plaza Mayor. Nke a mara mma Madrid ebe, nke na-akpali mmasị na dara oké ọnụ ụkpụrụ ụlọ dum.
Obí eze. Adreesị: Calle Bailén. Ebe obibi nke oge ochie nke Mooris aghọwo ebe obibi nke ụlọ na-emeghe maka nleta. A na-eji eserese nke ihe osise esere ụlọ ọnụ ụlọ.
Nwanyị Queen Cofii. Adreesị: Calle de Santa Isabel, 52. Ụlọ ọrụ a na-emepụta ihe ndị kachasị mma nke ndị na-ese ihe na narị afọ nke iri abụọ.
Cibeles Square. Adreesị: Plaza de la Cibeles. Ebe ọzọ mara mma na-adọta mmasị nke isi iyi nke narị afọ nke 18 na ihe oyiyi nke Cybele - chi nwaanyị nke ọmụmụ.
Ezigbo ihe gbasara Spain na Spaniards
Na Spain, karịa mba ọ bụla ọzọ na Europe, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ahịa. Ebe a na-akpọ Trapeznichat ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịnakwere.
A na-ahọrọ agba nke ọkọlọtọ mba na nsọpụrụ nke bullfighting: ọbara ọbara - ọbara, odo - ájá.
Na Spain anabatara ịlụ di ma ọ bụ nwunye mgbe ha gbasara 30, ụmụaka na-amalite - mgbe 35-40.
Obodo ahụ ekwela ka di na nwunye nwee mmekọahụ.
Ọtụtụ mgbe, ndị Spen na-edeba aha nna ha na nne ha.
Okpomọkụ na-ada n'okpuru mmiri ozuzo na Spain bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume.
Ọ bụ na Iberian Peninsula mepụtara guitar, a musket, a mop, sịga, a stapler, mma Navajo na goatskin.
Spain - ebe omumu nke Chupa Chups, ihe nkocha maka swiiti a maara nke ọma mere onwe ya Salvador Dali!
0.1 Ịgba Chaa chaa chaa na Spain
0.2 Ndepụta nke Top 10 Spanish Online Casino Sites
2.1 Ọgba chaa chaa na saịtị na-anabata ndị si Spain
3 Ịgba chaa chaa na Spain
3.0.1 Obodo Spain na akụkọ ihe mere eme nkenke
3.1 Casinos na ịgba chaa chaa na Spain
3.1.0.4 Euro Vegas na 2022
3.1.1 Spain na map nke Europe
3.1.2 Ebe nkiri Madrid
3.1.3 Ezigbo ihe gbasara Spain na Spaniards